मु म्बईबाट टेम्पोमा आए ४० नेपाली
Homeराष्ट्रिय खबरमु म्बईबाट टेम्पोमा आए ४० नेपाली
सुनिल ठाकुर/मलंगवा : को रोना भा इरस (कोभिड–१९) को सं क्रमण बढ्दै गएको र भारत सरकारले ल कडाउन थप्दै गएपछि दैनिक जीवन क ष्टकर बनेका ४० नेपाली टेम्पोमै चढेर भारतको मुम्बईबाट नेपाल आइपुगेका छन् । टेम्पो चलाएर गु जारा गर्दै आएका सर्लाहीका कविलासी नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकाका अटो चालक परिवार मुम्बईबाट टेम्पोमै चढेर घर आइपुगेका हुन् ।
उनीहरु नेपाल भारत सीमा नजिकसम्म टेम्पोमा आएका थिए । शनिबार राती भारतीय क्षेत्रमा टेम्पो छोडी पैदल खेतको बाटो हुँदै नेपाल छिरे र गाउँ आइपुगे। उनीहरु अहिले आ–आफ्नो स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका छन् । ११ वटा टेम्पोमा ४० जना सवार भइ भारतको सीतामढी जिल्लाको सोनवर्षामा शनिबार बिहान आइपुगेका थिए । मुम्बईबाट ५ दिन लगाएर उनीहरु घर आएका छन् । गत मंगलबारबाट टेम्पोमा हिँडेका उनीहरु शनिबार बिहान नेपाल भारत सीमा नजिकैको सोनवर्षा बजारमा आइपुगेका थिए ।
मुम्बईमा सं क्रमण बढ्दै गएको र काम ब न्द भएपछि आफूहरु टेम्पुमा परिवारसहित घर आएको कविलासी नगरपालिका ८ का रौशनप्रसाद साहले जानकारी दिए । ‘काम ब न्द भएपछि दैनिक जीवन क ष्टकर बनेको थियो । कामधन्दा बन्द भएपछि पैसाको अ भाव भयो । २ महिनासम्म जसोतसो गुजारा चलाइयो । तर, ल कडाउन खुल्ने छाँटकाट नदेखिएपछि ४० जना आ–आफ्नो टेम्पो लिएर घर आयौं । मंगलवार बिहान हिडेका थियौं । शनिवार बिहान सोनवर्षा बजारमा आएका थियौं । घर आउन खोज्दा भारतीय सुर क्षाकर्मीले रोकेर राख्यो’, साहले भने, ‘स्वा स्थ्य परी क्षण गराएर मात्र नेपाल जान भनेपछि शनिबार दिनभर स्वा स्थ्य परीक्षणमै लाग्यो ।’
सबैको स्वा स्थ्य अवस्था समान्य रहेको रिपोर्ट देखेपछि बल्ल आफूहरुलाई उनीहरुले छोडेको साहले बताए । मुम्बईबाट लिएर आएको टेम्पोलाई भारतीय क्षेत्रमा नै छोडेर आएको साहले बताए । ‘अवस्था समान्य भए फेरि जान्छु । होइन भने अब नेपालमै बसेर कामधन्दा गर्ने हो। खेतको बाटो हुँदै रातभरिमा हामीहरु आ–आफ्नो गाउँसम्म पुग्न सफल भयौं । सबैजना अहिले क्वारेन्टाइनमा छौं’, उनले भने ।
कविलासी नगरपालिकामा शनिबार रातभरिमा २९ जना आएका छन् । जसमा २ जना महिला र २७ जना पुरुष रहेको स्वा स्थ्यशाखा प्रमुख संजय झाले जानकारी दिए । आउनेहरुमा बढी कविलासी नगरपालिका वडा नं. १ पिपरियाका रहेका छन् । सबैलाई अगर्वास्थित विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखेको उनले बताए । स्वास्थ्य परिक्षणको काम हुँदै छ ।
त्यसैगरी बसबरिया गाउँपालिकामा आइतबार बिहानसम्म ११ जना आएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामअयोध्या रायले जानकारी दिएका छन् । आउनेहरु सबै वडा नं. ४ र ५ धनगढा गाउँको रहेको छ । सबैलाई वडा नं. ६ मा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । बिहान आएकाको स्वा स्थ्य प रीक्षणको काम अहिले हुँदै छ ।
नेपाल आएको देखेपछि सु रक्षाकर्मीले गाउँघरमा जान नदिइ उनीहरुलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेका छन् । समाजलाई जोगाउनका लागि उनीहरुलाई घरपरिवारमा जान नदिइ क्वा रेन्टाइनमा पुर्याएको सु रक्षानिकायले जनाएका छन् । -अन्नपूर्ण पोष्ट
ना गढुंगामा स्वा स्थ्यकर्मीलाई दु र्व्यवहार गर्ने युवालाई प क्राउ गर्न प्रदेश मन्त्रालयको माग
राजेश र अरुणको सा हस : जसले को रोनाबाट मृ त म हिलाको श वको व्यवस्थापन गरे
buy tadalafil generic – tadalafil online pharmacy tadalafil generic name
finasteride tablets – http://finasteridepls.com/ finasteride
March 10, 2021 at 11:55 pm
what’s the difference between propecia and finasteride – propechl.com how long does it take for finasteride to work
March 12, 2021 at 4:51 pm
tadalafil cost – http://xtadalafilp.com/ canadian online pharmacy tadalafil
March 16, 2021 at 4:09 pm
Wwovjg – http://virviaga.com/ sildenafil side effects
March 23, 2021 at 9:21 am
March 23, 2021 at 7:26 pm
Tkcrfn – ivermectin india Zredic vnnrpy
March 24, 2021 at 1:57 am
herbal ed cheap ed pills from canada
March 24, 2021 at 9:39 pm
Ynpten – vardenafil usa Rsrdgd serlvl
Keclmf – furosempi.com Bcfxmc xuvnbz
चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानको निधन
सरकार क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा चुकेको स्वीकार
ट्रम्पले फेरि भन्यो : कोरोना ‘चिनियाँ म’हामारी’
रोग प्रतिरोधात्मक क्ष’मता बढाउने सजिलो र सस्तो उपाय गुर्जोका ५ फाइदा
४ वर्षे कार्यकाल सकाएर आज बिदा भए कुलमान
स्थानीय तहको स्वः मूल्यांकनमा मंगलसेन नगरपालिका प्रथम
निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई बीपी कोइरालाको तस्वीर प्रयोग गर्न रोक लगाए के हुन्छ ?
माघ १० गते सोमबारको राशिफल
५० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि टेकु अस्पतालले बन्द गर्‍यो नियमित खोप कार्यक्रम
सभामुख र सत्तापक्षसँग खनियो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले